Lazaina Fa i Arabia Saodita no Mamatsy Vola ny Fampielezankevitr’i Macron · Global Voices teny Malagasy
Lazaina Fa i Arabia Saodita no Mamatsy Vola ny Fampielezankevitr'i Macron
Voadika ny 21 Avrily 2017 16:48 GMT
Ity lahatsoratra ity dia nifototra tany am-piandohana tamin'ny asa fanamarinana notontosain'ireo mpamoaka lahatsoratra ao Frantsa sy any Royaume-Uni niaraka tamin'ny CrossCheck (frantsay | anglisy), fiarahana miasa tsy nikatsahana tombony ara-bola mba hiadiana amin'ireo fandisoana vaovao ety anaty serasera, ary naverina navoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty amin'ny Global Voices.
Tamin'ny Alakamisy ny tranonkala lesoir.info, izay nisora-tena ho ny tranonkalan'ny gazety belza Le Soir, dia namoaka lahatsoratra momba ny lazainy fa famatsimbola ataon'ny fitondrana ao Riyad ny fampielezankevitr'i Macron. Mba hialàna amin'izay rehetra mety ho fifanjevoana, nitondra fanazavàna nandàvany izany tao amin'ny Twitter ny lesoir.be.
Lesoir.info, tranonkala iray voasoratra tamin'ny 14 Febroary 2017 ao amin'ny Delaware (Etazonia), dia naka ny sary avy ao amin'ilay tranonkala belza ary nanampy mihitsy, mba hamitahana ireo mpisera ety anaty aterineto, ny sary famantarana ny AFP ho ao anatin'ilay lahatsoratra, nefa ny Agence France-Presse tsy namoaka na inona na inona resaka maika momba io resaka io.
Namerina naka ilay vaovao ireo tranonkala hafa talohan'ny niverenan'izy ireo ilàlana niaraka tamin'ny fanitsiana avy amin'ny Soir. Ilay solombavambahoakan'ny FN Marion Maréchal-Le Pen koa dia nampita ilay vaovao tao amin'ny kaontiny Twitter, talohan'ny namafàny ny bitsika nalefany.
Hahita lahatsoratra maro momba ireo fisandohana hafa sy ny fifidianana ao Frantsa ianareo eto.